Niravona tamin’ny ampahany ny olana… : nihitsoka tao Toamasina ny volabe 8 kaontenera | NewsMada
Niravona tamin’ny ampahany ny olana… : nihitsoka tao Toamasina ny volabe 8 kaontenera
Efa nananontanona ny krizy hafa. Tafahitsoka tao amin’ny seranantsambon’i Toamasina ny volabe 8 kaontenera an’ny Banky foibe. Vokatry ny fitokonan’ny ”transitaires” sy ireo mpitatitra izany. Soa fa nisy ny fifandresen-dahatra ka niravona tamin’ny ampahany aloha ny disadisa.
Mitsipaka marindrano ny fifanarahana niarahana tamin’ny minisiteran’ny Fitaterana ny orinasa mitantana ny kaontenera ao amin’ny seranan’i Toamasina (Mictsl). Manoloana izany, nitokona nanomboka omaly 26 desambra, tokoa ny fikambanan’ny mpikarakara ny entana miondrana sy hafarana avy any ivelany APTR sy ny Vondron’ny mpitatitra entana (GPTE) eto Toamasina. Nihitsoka tanteraka ny fikarakarana ny entana any amin’ny seranan-tsambo, ary anisan’izany ny volabe ao anaty kaontenera miisa valo an’ny Banky foiben’i Madagasikara. Nivory haingana ny etamazaoron’ny mpitandro filaminana OMC, nikaroka vahaolana. Tsy afaka niditra koa ireo kamiao mpitatitra solika sy haka entana fihinana andavanandro.
Nilaza ny filohan’ny GTPE, Timbou Alain, fa tsy olana ho azy ireo ny fivoahan’ny kamiao mitondra ireo vola ireo mivoaka ny seranan-tsambo, fa tsy ekena kosa ny fidiran’ny kamiao avy aty ivelany ao anatiny. “Tsy voafetra ny fitokonana saingy mijanona rehefa voavaly ny fangatahanay, na ao anatin’ny 30 mn aza”, hoy ihany izy.
Nambaran-dRtoa Narove Mamy, talem-paritry ny Fitaterana eto Toamasina, fa “ilaina ny fanohizan’ny Mictsl ny fifampidinihana mba tsy hiantraika any amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina”.
Tsy afaka niainga ny sambo mankany avaratra
Tsiahivina, fa takin’ny APTR sy ny GPTE ny fanalavana ho 15 andro aorian’ny fahatongavan’ny entana ny fe-potoana tsy andoavana sarany. Nisy ny fifanarahana tamin’ny minisiteran’ny Fitaterana, fa atao dimy andro ny fe-potoana tsy andoavam-bola, mila soratan’ny Mictsl ny ora fidirana sy fivoahan’ny kamiao, ary hafainganina ny fiasa, fa tsy ho 24 ora intsony. Saingy notsipahin’ny Mictsl avokoa ireo.
Miantraika any amin’ny fitaterana an-dranomasina ankapobeny koa ity fitokonana ity. Maro ny sambo tsy afaka niainga, omaly talata, mampitohy an’i Toamasina sy ny faritra avaratra, indrindra ireo sambo lehibe avy any ivelany.
Fangalam-bolan’ny polisy sy ny zandary
Ankoatra ireo, tafiditra ao anatin’ny fitakiana sy ny fitokonan’ny APTR sy ny GPTE koa ny fihetsiky ny polisy sy ny zandary maka vola amin’izy ireo etsy amin’ny fihodinana eny Boulevard Ivondro hatrany anaty seranan-tsambo. “Mahatratra 15.000 Ar farafahakeliny ny alaina amin’ny kamiao iray, ary impito voasava izy ireo”, hoy ny mpamily sy ny mpanampy azy.
Araka ny vaovao farany voaray, niravona tamin’ny ampahany aloha ny olana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Tafavoaka ihany ireo vola, saingy mbola mitohy ny fifampidinihana satria mbola misy ny olana hafa eo amin’ny Mictsl ankilany, ary ny APTR sy ny GPTE andaniny.